Zikhandle ukuze uthole uhlelo oluthandayo
ABANYE bafuna uMaFresh angene emini phakathi nesonto kodwa kungenzeka basafuna aqine ukhakhayi
FANELESIBONGE BENGU | February 5, 2020
KUNGENZEKA ukuthi abasakazi baba nephupho lokushayela izinhlelo ezidlala kusukela ngo-6 ekuseni kuya ku-6 ntambama ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, njengoba zithathwa njengezibalulekile.
Yize kunjalo, akusibona bonke abagcina belitholile lelo thuba. Abanye nje bagcina ngokwenza izinhlelo zasebusuku noma bafakwe kwezangempelasonto.
Ukungena phakathi nesonto bakugcina uma kukhona abambambele noma uma bethula izinhlelo eziyisipesheli njengalezo ezenziwa ngoDisemba.
Kuvamisile ukuthi umsakazi aqhubeke nokusebenza ngoba ehlalele ethembeni kodwa angalitholi ithuba. Kwesinye isikhathi kuhambe iminyaka kodwa eyibambile ebusuku noma ngempelasonto.
Ngicabanga ukuthi yilapho umphathi wezinhlelo engena khona. Abaphathi bezinhlelo abaqotho nabawenza kahle umsebenzi wabo kumele bahlale phansi nabasakazi, babatshele ukuthi amandla abo akuphi futhi yikuphi lapho bexega khona.
Ukusebenza ezinhlelweni zasebusuku kusiza ekutheni abasakazi bafunde, baqinise ukhakhayi baphinde balungise lapho kuxega khona.
Kumele babachazele futhi babacacisele ngezindlela abaxhumana ngazo nabalaleli nalapho benza kahle.
Uma umsakazi enephupho lokungena phakathi nesonto kumele azikhandle ukuze iphupho ligcine lifezekile.
Ngaleyo ndlela umsakazi uma echazeliwe ukuthi isiteshi simbona engcono kuphi, uyazi ukuthi ayi ngoba ezitshwa noma ebukeleka phansi kodwa yindlela loyo mphathi elibona ngayo ithalente lakhe.
Uma umsakazi ebona ukuthi iphupho lakhe ngeke lifezeke kuleso siteshi, angahlela kahle indlela yokuphuma eyobheka amadlelo aluhlaza hhayi ukuthi umuntu alinde umnyama ongenafu.
Kungakuhle ukuthi nabasakazi bangadlali ngabaphathi bezinhlelo kodwa bawazi ukuthi amandla abo akuphi. Akuyena wonke umuntu oyongena phakathi nesonto ngisho noma enekhono kangakanani kodwa uma kungasikho lokho okudingekalayo, ngeke angene. Kunalokho qinisa lapho omuhle khona ube ngungoti wakhona.
Kungabasiza abaphathi bezinhlelo ukwazi ukuthi abasakazi babo bafunani ukuze bangavele bafake umuntu ohlelweni angalufuni noma ezwa sengathi ngeke akwazi ukulwenza. Uzomqhatha nabalaleli, kanti kungase kwehlise nokuzethemba kwakhe. Akugcini kuphela ngokulimala komsakazi kodwa nesiteshi uqobo kungenzeka kube khona abasishintshayo uma sekuyisikhathi salolo hlelo okanye babaleke kuso sonke uqobo.
Nabo abasakazi kumele banganqeni ukuya ehhovisi lomphathi bamtshele lapho bedinga ukulekelelwa khona ukuze bawenze ngendlela efanele umsebenzi.
* Ungangibhalela [email protected], kuTwitter @fanelebengu noma ku-Instagram @fanelebengu.